Saturday July 25, 2020 - 10:56:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidanka Yahuudda ayaa lagu sheegay in diyaarado dagaal ay ku duqeeyeen bartilmaameedyo kuyaalla gudaha dalka Suuriya.
Diyaaradaha Yahuudda ayaa la sheegay in ay gantaallo ku beegsadeen saldhigyo melleteri oo kuyaal gobolka Alquneydarah ee dhaca Koonfurta Suuriya islamarkaana xuduud beenaadka Falasdiin kulaala.
Afhayeen uhadlay melleteriga Yahuudda ayaa sheegay in diyaaradaha Helicopters-ka ay ku weerareen laba saldhig oo ciidamada nidaamka Suuriya ay ku lahaayeen meel ku dhow aagga khadka cagaaran ee Buuralayda Jowlaan.
Yahuudda ayaa weerarkan ku macnaysay difaacu nafsi ay uga jawaabayeen weerar shalay lagu qaaday xarumo Yahuuddu ku lahaayeen buuralayda Jowlaan waxaana weerarkaas ka dhashay waxyeello gaartay gaadiid iyo dhismayaal.
"Melleteriga Israa'iil ayaa diyaarado Helicopters ah ku weeraray bartilmaameedyo kuyaal Koonfurta Suuriya iyagoo ka jawaabayay weerar daandaansi ah oo shalay lagusoo qaaday" sidaas waxaa yiri Afhayeenka ciidanka Yahuudda.
Dhinaca kale nidaamka bishaar Al Asad ayaa qiray in weerar cadowtooyo ay lakulmeen ciidamadiisa xuduud beenaadka ku sugan, wakaaladda wararka SANA ayaa sheegtay in 2 askari ay ku dhaawacmeen gantaallada kasoo dhacayay diyaaradaha Yahuudda islamarkaana ay waxyeello soo gaartay dhismayaal.
Tallaabadan ayaa imaanaysa laba maalmood kadib markii ay Yahuuddu kumanaan askari ku daad gureeyeen deegaanada xuduudaha dhaca si ay uga feejignaadaana wax ay ugu yeereen khataro ka imaanay Ururka shiiciga Xisbullaah.
Imaaraatka iyo Baxrayn oo si rasmi ah heshiis ula saxiixday Yahuudda.